Ny zava-misy sy fampahalalana momba an'i Espana | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | Toerana fitsangatsanganana, España
Espana dia iray amin'ireo firenena eropeana mahaliana indrindra hitsidika azy. Ny tantarany, ny kolontsainy ary ny entona entiny dia ekena eran-tany. Ary ny mponina ao dia malaza ho tena sosialy sy sariaka miaraka amin'ireo izay mitsidika ireo tany ireo.
Na mponina ianao na olona te hahalala momba an'ity zoro kely eto an-tany ity dia omenay anao ato amin'ity lahatsoratra ity data sy fampahalalana fototra momba an'i Espana tena hahagaga anao izany.
1 Aiza i Espana?
2 Toetran'i Espana
5 Fizahan-tany any Espana
Aiza i Espana?
Firenena izay ao anatin'ny vondrona eropeana. Miaraka amin'ny velarany 504,645 kilometatra toradroa, dia mizara Vondrom-piarahamonina mahaleo tena 17. Any Eropa Andrefana no misy azy, ary mizara sisintany amin'i Frantsa any avaratra, Portugal any andrefana ary Gibraltar any atsimo. Voahodidin'ny ranomasina roa izy: ny Atlantika any andrefana sy atsimo, ary ny Ranomasina Mediterane eo atsinanana. Tokony holazaina fa tsy nisy ny Ranomasina Mediterane raha tsy "misokatra" ny Làlan'i Gibraltar, noho izany dia mbola ranomasina kely izy izay nahita ny fahaterahana sy ny fahafatesan'ny maro tamin'ireo sivilizasiona taloha manan-danja indrindra, toa ny Romanina, ny Grika na ny Egyptianina. Fa aleo tsy mivaona. Andao hojerentsika izao ny toetrandro misy azy ireo eto amin'ity firenena ity.
Hafa tanteraka ny toetrandro any Espana. Noho ny haisoratra dia afaka mirehareha amin'ny fahafahany mankafy ny toetr'andro samihafa.
Avaratry ny firenena: any avaratra, ao amin'ny vondrom-piarahamonina Galicia, Cantabria, ny Basque Country, Navarra, Aragon avaratra ary Catalonia avaratra, dia misy toetr'andro any an-tendrombohitra mahazatra. Tsy ara-dalàna ny orana, be dia be any andrefana. Raha ny maripana dia ambany amin'ny ririnina izy ireo, mahatratra ny hatsiaka mahery ary malefaka amin'ny fahavaratra.
Atsimon'ny firenena: any atsimo, any amin'ny fiarahamonina Andalusia sy Murcia, ny toetrandro dia Mediteraneana matetika; izany hoe, ny hafanana avo amin'ny fahavaratra, ny ririnina malemy kokoa. Ny fanala sasany dia mety hitranga any amin'ireo faritra an-tendrombohitra (toy ny any Sierra Nevada, any Granada) rehefa ririnina, fa amin'ny ankapobeny eo amin'ity zoron'ny Saikinosy Iberiana ity dia mankafy toetrandro mafana izy ireo. Mazava ho azy, ny atsimo andehananao, dia vao mainka ianao mila manosotra masoandro, satria maina ny toetrandro, indrindra any Ceuta sy Melilla, izay any Afrika Avaratra. Any amin'ny vondronosy Canary, any andrefan'i Afrika, dia mankafy toetrandro tropikaly amin'ny ankapobeny izy ireo; na dia tokony homarihina aza fa ny fanala dia mety hitranga amin'ny faritra avo kokoa mandritra ny ririnina.
Ity iray ity: any atsinanana dia misy toetrandro Mediteraneana. Ny vondrom-piarahamonina Valencien, Catalonia ary ny Nosy Balearic dia manana ririnina malefaka, misy fanala kely indraindray, ary fahavaratra mafana (ambonin'ny 30 aboveC). Any amin'ny Nosy Balearic dia tsy maintsy lazaina fa mando be ny fahavaratra noho ny voahodidin'ny ranomasina, izay mahatonga ny fahatsapana hafanana lehibe kokoa noho izay asehon'ny thermométer. Kely dia kely ny fantsakana.
Andrefana sy afovoan'ny firenena: Ao amin'ny fiarahamonina Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid ary atsimon'i Aragon, dia misy toetrandro mangatsiaka mandritra ny ririnina, miaraka amin'ny fanala mahery. Be ny orana any avaratra kokoa, ary somary latsaky ny atsimony. Mafana ny fahavaratra.
Ity dia firenena iray miteny fiteny maro. Ny fiteny ofisialy dia, mazava ho azy, ny Castilian na Espaniola, fa ny hafa kosa miavaka, toy ny Catalan miteny amin'ny Catalonia, Basque ao amin'ny vondrom-piarahamonina Basque, na Galisiana any Galicia.
Amin'ireny dia tokony ampiana ireo fitenim-paritra samihafa, toy ny Andalusian, avy any Madrid, Majorcan, sns
Ny isam-ponina, araka ny fanisam-bahoaka farany natao tamin'ny taona 2015, avy amin'ny National Institute of Statistics, dia 46.449.565 XNUMX ny mponina, miaraka amin'ny lehilahy 22.826.546 ary vehivavy 23.623.019.
Fizahan-tany any Espana
Ity firenena ity dia manana betsaka azo atolotra ho an'ny mpizahatany. Na aleonao mandany ny fialantsasanao eny amoron-dranomasina, na raha iray amin'ireo tia ny tendrombohitra sy ny fanatanjahan-tena azo atao ianao dia mila mankany Espana fotsiny.
Amin'ny ankapobeny, ny toerana rehetra dia mahavariana, saingy marina fa misy tanàna marobe izay be mpitia ary, noho izany, no be mpitsidika indrindra koa. Ireto misy toy izao:
Barcelona: ny tanàna nahaterahan'ny mpanao maritrano Antonio Gaudí. Ny tanànan'i Barcelona dia mandray ireo mpizahatany amin'ny fialamboly sy fialamboly marobe amin'ny tsiro rehetra: afaka mandeha amoron-dranomasina ianao, mitsidika ny tanàna taloha, na mihanika tendrombohitra.
Seville: Tanàna Andalusianina tsara indrindra. Io no feon'ny mozika nentin-drazana Andalosiana, ary na ankehitriny aza dia mbola velona hatrany ny foara sy ny andro manokana miaraka aminy. Ny April Fair dia feno loko, mozika ary fifaliana izay manaitra ny olona rehetra izay mandeha.
Tenerife: tsy mila mandeha lavitra ianao vao afaka mankafy morontsiraka tropikaly. Ao Tenerife, noho ny toetrandro mahafinaritra ananany mandritra ny taona dia afaka mankafy ny moron-dranomasiny ahafahanao mitety onja ianao.
Madrid: satria izy no renivohitry ny firenena, mazava ho azy fa iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra izy. Eto ianao dia afaka mitsidika ny Prado Museum, angamba ny zava-dehibe indrindra amin'ny firenena iray manontolo, izay mampiseho asa mahaliana toy ny Garden of Earthly Delights, nataon'i Hieronymus Bosch. Azonao atao ihany koa ny mitsidika tranombakoka iray hafa izay tena akaiky an'io iray io, dia ny tranombakoka Thyssen. Ary raha tianao ny zavamaniry dia mandehana mijery ny Royal Botanical Garden na ny Parque del Oeste dia ho tianao io 😉.
Nosy Mallorca: Ity nosy kely ity (ny lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Balearic) dia mandray mpizahatany an'arivony isan-taona izay maniry hankafy ny torapasika, ny fiainana amin'ny alina na ny natiora. Ary satria manana toetr'andro malefaka izy, miaraka amin'ny andro mangatsiaka tokoa, dia tena te-hitsangatsangana ianao.
Fantatrao izao, raha te handany andro tsy hay hadinoina ianao dia mandehana any Espana. Azo antoka fa hanana fotoana mahafinaritra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Data sy fampahalalana fototra momba an'i Espana
Euphrasian dia hoy izy:
Ny sari-tany ampiasaina dia tsy ny sarintany politika Espaniôla, ary tsy fantatra amin'ny maha-mpanao hosodoko an'i Gaudí (mpanao mari-trano izy). Raha tsy izany lahatsoratra mahasoa
Mamaly an'i Eufrasio